နတ်မောက်စျေး ညအချိန်မတော် မီးလောင်မှု လက်သည်မပေါ် - Myanmar Pressphoto Agency
Fire Magway MPA Myanmar NatmaukMarket News
News November 14, 2021 ·0Comment
မကွေးတိုင်း၊ နတ်မောက်မြို့နယ် နတ်မောက်မြို့မစျေးကြီးမှာ နိုဝင်ဘာလ၁၃ရက် ညပိုင်းတွင် တစျေးလုံးနီးပါး မီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရသော်လည်း အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးကြောင်း မီးငြှိမ်းသတ်မှုနှင့် ရှင်းလင်းရေးလုပ် ဆောင်နေသည့် မကွေးတိုင်းမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက် ညပိုင်း၉နာရီခွဲအချိန်မှစ၍ လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ည၁၁နာရာရီခွဲချိန်တွင် မီငြိမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းလင်းရေးများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
ညမထွက်ရအချိန်တွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် နတ်မောက်မြို့မဈေး မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ဝေဖန်နေကြသည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းကျွမ်းချင်း ကာလတွင် ဒေသခံများ၏ မီးလောင်ကျွမ်းရန် လာရောက်ကူညီမှုကိုလည်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဝင်ရောက်ဟန့်တားမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံအချို့က ဆိုသည်။
“စောစောစီးစီး ငြှိမ်းဖို့ကို သေနတ်တယမ်းယမ်းလုပ်နေတော့ မသွားရဲတော့ဘူးလေ။ မီးသတ်တွေလာပြီး မီးတော်တော် မနိုင်တော့မှ ဝင်ကူကြရသလိုဖြစ်တာ။ အဲဒီအချိန် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး”ဟု နတ်မောက်စျေးအနီး နေထိုင်သည့် ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဆိုင်ခန်းရာနှင့်ချီပြီး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီး မီးလောင်ကျွမ်းသည့် အကြောင်းအရင်းကိုသာမက ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု စုစုပေါင်းကိုလည်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပေ။
“လက်ရှိအချိန်ထိ ရှင်းလင်းရေးတွေ လုပ်ဆောင်နေကြတုန်းပါပဲ။ ဘာကြောင့် လောင်ကျွမ်းတာနဲ့ ဘယ်လောက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းတော့ ကျနော်တို့ဆီ မရောက်သေးပါဘူး” မကွေးတိုင်းမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက MPAသို့ ပြောသည်။
နတ်မောက်မြို့နယ် မီးသတ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း “ဆိုင် ဘယ်နှစ်ဆိုင်ပါသွားတယ် ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ အခုထိ ရှင်းလင်းနေတုန်းပါပဲ။ အခုကိုဈေးထဲမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
နတ်မောက်မြို့ ဒေသခံအချို့၏ အတည်ပြုချက်အရ ဈေး၏ ၄ပုံ၃ပုံခန့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ဆိုင်ခန်းပေါင်း၂၄၀ ကျော်ခန့် လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နတ်မောက်မြို့မစျေးသည် နတ်မောက်မြို့ပေါ်ရှိ ဒေသခံများအတွက်သာမက နတ်မောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၂၉၀ ကျော်အတွက်ပါ အားထားနေရသည့် ပင်မစျေးကြီးဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်မေလအတွင်းကလည်း ရွှေဘိုရှိမြို့မဈေးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး တစ်ဈေးလုံးနီးပါး မီးလောင်ကျွမ်း ပျက်စီးခဲ့သေးသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ညမထွက်ရအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်ရှိ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင် Ruby Mart နှင့် ဝေဇယန္တာလမ်းမပေါ်ရှိ ဂန္ဓာမာလက်ကားအရောင်းစင်တာ Gandama Wholesales Center နှစ်ခု လက်သည်မပေါ်ဘဲ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်ကို CNN ရုပ်သံသတင်းထောက်၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွက် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်လုပ်ကြံမှုတစ်ခုအဖြစ်သာ ပြည်သူလူထုက ဝေဖန်ခဲ့သည်။
#မကွေးတိုင်း #နတ်မောက်မြို့မဈေး #မီးလောင်မှု#MPA
Photo – OoNayLin
Natmauk Market Set on Fire at Night Time and Culprit Unidentified
Nearly the entire Natmauk market was set on fire on November 13 night in Magway region’s Natmauk township and no reason has been known, said an official from Magway region Fire Department who was working on clearance and extinguishing the fire.
The fire began at 9:30 November 13 and was extinguished at 11:30 at night and clearance operations are being carried out till now.
As it was burnt during the night curfew time, locals criticized that it was probably done by the terrorist military.
The local residents’ help to put the fire out as it started was also deterred by the terrorist military.
“To put it out early, we dared not go as they were sticking around with guns. The fire fighters came when the fire was already out of control and we could only help then. It was beyond control by then”,aresident near Natmauk market said.
Hundreds of stalls were burnt down in the fire and neither the reason nor the total damage has been reported by the fire department.
“Clearances are ongoing till now. Why it was set on fire and list of total damage have not yet arrived to us”, said one Magway fire department official to MPA.
An official from Natmauk fire department also said, “We cannot tell yet how many shops were burnt. We’re still clearing it up now. We’re still there till now”, he said.
According toaconfirmation fromaNatmauk resident, three-quarters of the market andatotal of 240 shops were gone in the fire.
Natmauk city market is the main market not only for Natmauk town residents but also for over 290 villages within Natmauk township.
Last May also, Shwebo city market was set on fire and nearly the entire market was damaged.
In Yangon as well, the terrorist military-owned Ruby Mart and two Gandama Wholesales Centers on Waizayantar road were set on fire during night curfew times with no identified culprits.
This was criticized by the public as merelyapre-planned set-up by the terrorist military for CNN reporter’s Myanmar visit.
#MagwayRegion #NatmaukCityMarket #Fire #MPA